रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - सेक्सन - सेक्सन ट्याब वा रोज्नुहोस् ढाँचा - सेक्सनहरू
जब तपाईँं कागजात खोल्नुहुन्छ जसले लिङ्क सेक्सनहरू समावेश गरेको छ, तपाईँंलाई लिङ्कहरू अद्यावधिक गर्न प्रोम्प्ट गरिएको छ.
यदि यो पृष्ठमा मात्र सामाग्री हो भने तपाईँं सेक्सन लुकाउन सक्नुहुन्न, वा हेडरमा, फुटरमा, पादटिप्पणी, फ्रेम, वा तालिका कक्ष.
अर्को उदाहरण फाँट चल "x" सिर्जना गर्नु र यसको मान १ मा सेट गर्नु हुनेछ। त्यसपछी एउटा सेक्सन लुकाउनलाई यो चलमा आधारित एउटा शर्त निर्दिष्ट गर्नुहोस्, जस्तै: "x eq 1". यदि तपाईँंले सेक्सन प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ भने,चल "x" को मानलाई "0" मा सेट गर्नुहोस्।
जब हालको कागजात XForms कागजात भएको बेला तपाईँंले यो क्षेत्रको संवाद देख्नुहुन्छ.
पढ्ने-मात्र कागजातमा सम्पादन
यदि कागजात पढ्ने-मात्र मोडमा खुला भयो भने सेक्सनको सामाग्रीहरू सम्पादन गर्न अनुमति चयन गर्नुहोस्.
अवस्थाहरूका लागि बाक्यसंरचना
Title is: सेक्सन